स्वास्थ्य | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
वजन घटाउन को लागी मिति
प्रकाशित 22.07.2021 22.07.2021
के तपाईंलाई थाहा छ मितिहरू स्लिम फिगर र स्वास्थ्यको लागि सामान्य उपयोगी छ! तिनीहरू स्वादिष्ट छन्, मीठो दाँतलाई रमाउनेछ र अतिरिक्त पाउन्ड बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्नेछ!
स्किजोफ्रेनिया के हो र यसको लक्षणहरू के हुन्?
प्रकाशित 16.02.2021 16.02.2021
सबैभन्दा भयानक रोगहरूले प्राय: अ organs्गहरूलाई होइन तर चेतनालाई असर गर्छ। स्किजोफ्रेनिया एक रोग हो जुन धेरै प्रकारहरूमा आउँदछ। स्किजोफ्रेनिया भ्रम, भ्रम, र व्यवहार र सोच मा फरक को माध्यम बाट प्रकट हुन सक्छ।
वसन्त भिटामिनको कमीको सामना कसरी गर्ने
प्रकाशित 29.01.2020 29.01.2020
वसन्त आयो। बिहान घाम झ्यालको बाहिर छ र चराहरू गाउँदैछन्, तर यो झन झन कडा हुँदै गइरहेको छ, र काम पछि कुनै पनि चीजको लागि कुनै शक्ति छैन। यो प्रायः भोली जस्तो लाग्छ ...
गर्भावस्थामा मलहम "लेवोमेकोल"
प्रकाशित 15.09.2019 11.12.2019
गर्भवती महिलाको नयाँ स्थितिको अधिग्रहणको साथ, सुन्दर यौनिक जीवनले उनको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्दछ। त्यसोभए, धेरै गर्भवती आमाहरू विशेष गरी उनीहरूको पोषण र कल्याणको अनुगमन गर्न थाल्छन्। जे होस्, जस्तै ...
इलेक्ट्रोनिक सिगरेट "पोन्स": उपयोगका लागि निर्देशनहरू, सुविधाहरू, समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 10.12.2019
धेरै धूम्रपान गर्नेहरू, आफ्नो बानी उनीहरूलाई सकेसम्म सुरक्षित र आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई बनाउन चाहने, इलेक्ट्रोनिक vaping उपकरणहरू मा बारी। आजकल, यो एकदम परिचित विधि अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। उत्कृष्ट ...
कामका लागि मेडिकल जाँच कहाँ पाउने? सार्वजनिक र निजी क्लिनिक बीच भिन्नता
आज, धेरैलाई थाहा छैन कहाँ कामको लागि मेडिकल जाँच लिने। वास्तवमा त्यहाँ दुई मात्र योग्य विकल्पहरू छन्: सार्वजनिक क्लिनिकहरू र निजी मेडिकल सेन्टरहरू। राज्य क्लिनिकहरूको बारेमा तिनीहरू सबै ...
एक व्यक्तिको तल्लो चरम को मांसपेशिहरु: संरचना, कार्यहरु
तल्लो अंग (खुट्टा) ले पर्याप्त ठूलो भार बोक्दछ। तिनीहरूको कार्यहरूमा आन्दोलन र समर्थन प्रदान गर्दछ। तल्लो कट्टरको मांसपेशि, शरीर रचनाको जसको लेखमा वर्णन गरिनेछ, सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ ...
औषधि "रउनाटिन": के सहयोग गर्दछ? गुण र रचनाको विवरण
प्रकाशित 15.09.2019 25.11.2019
प्रायजसो, परिक्षण पछि, डाक्टरहरूले बिरामीहरूलाई "राउनाटिन" भन्ने औषधि लेख्छन्। औषधिले केबाट मद्दत गर्दछ र यसको संरचनामा के समावेश छ? कुन अवस्थाहरूमा गोली लिनु आवश्यक छ र उपचार गर्न सक्छ ...
आत्मीय स्वास्थ्य: मासिक धर्मको बीचमा रक्तस्राव हुन्छ
प्रकाशित 15.09.2019 24.09.2019
महिला शरीर धेरै रोचक र जटिल छ। हर्मोनल पृष्ठभूमिका कारण, हरेक महिना परिवर्तनहरू यसमा हुन्छन्। चक्रको स्थिरता अप्रत्यक्ष रूपमा सुस्पष्ट लिंगको स्वास्थ्य को संकेत गर्दछ। तर प्राय: महिलाहरू ...
टाउकोको गणना गरिएको टोमोग्राफी: प्रक्रियाको बारेमा समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 26.12.2019
बिरामीका गुनासोहरूको आधारमा एक्लोसिन गर्न सँधै सम्भव छैन, विशेष गरी यदि स्नायु प्रणालीबाट समस्याहरू अवलोकन गरिन्छ। टाउग्रा गणना गरिएको टोमोग्राफी (टोमोग्राम) ले यसको अवस्था अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक हो ...
इम्यूनोलॉजिकल रक्त परीक्षण (इम्यूनोग्राम): संकेतहरू, सम्पन्न गर्ने कार्य, डिकोडिंग
प्रकाशित 15.09.2019 05.12.2019
रोग प्रतिरोधात्मक रक्त परीक्षण गम्भीर ब्याक्टेरिया र भाइरल रोगहरूको प्रतिरोध गर्न बिरामीको शरीरको क्षमता निर्धारण गर्न चिकित्सा विशेषज्ञहरूले प्रयोग गर्ने विधि हो। डायग्नोस्टिक परिणामहरूले प्रतिरक्षा संरक्षणको स्तर निर्धारण गर्दछ, गुणवत्ता र ...
व्यायाम थेरापी: ग्रीवाको मेरुदण्डको हर्नियाको लागि व्यायाम। ग्रीवा मेरुदण्डको हर्नियाको साथ जिम्नास्टिक के हुनुपर्दछ?
एक गर्भाशय ग्रीवा हर्निया एक सबैभन्दा खतरनाक विकृति हो जुन शरीरमा एक तीव्र असमान बल भारको कारण हुन्छ। यस रोगका लक्षणहरू सबै बिरामीहरूमा प्रायः समान हुन्छन्। एक व्यक्ति घाँटी, टाउको दुख्न थाल्छ ...
Anticholinergics: एक सूची। एन्टिकोलिनर्जिक औषधिको कार्यविधि
एन्टिकोलिनेर्जिक औषधिहरू ड्रगहरू हुन् जसले कोलोनर्जिक रिसेप्टर्सहरूमा प्राकृतिक मध्यस्थ, एसिटाइलकोलीनको कार्य रोक्दछ। विदेशी साहित्यमा, औषधीय पदार्थहरूको यस समूहलाई "प्रलोभन" भनिन्छ डिलिरेम हुन सक्ने क्षमताको कारण।
औषधि "Resorcinol": प्रयोगको लागि निर्देशन
रिसोरसिनोलको चिकित्सीय गुणहरू के के हुन्? यस औषधिको प्रयोग, फोटो र सुविधाहरूको लागि निर्देशनहरू तल दिइएका छन्। संरचना, निर्मित फार्महरू रिसोरसिनोल के हो? प्रयोगको लागि निर्देशनहरूले यो पदार्थ ...
उच्च रक्तचाप एन्सेफलोपथी के हो? कारणहरू, लक्षणहरू, उपचार
प्रकाशित 15.09.2019 16.10.2019
सेरेब्रल इस्केमिया, स्ट्रोक, हार्ट अट्याक र एन्सेफलोपथी सबैभन्दा गम्भीर रोगहरू मानिन्छ। ती प्रायः घातक हुन्छन्। मस्तिष्क विकृतिहरूको ठूलो संख्यामा एन्सेफलोपथी विशेष ध्यान दिन योग्य छ। यो रोगहरूको एक व्यापक समूह हो। तिनीहरू द्वारा विशेषता हो ...
ओब्निन्स्क, पुनर्वास केन्द्र: विवरण, विशेषज्ञहरू, सेवाहरू र समीक्षाहरू
मानव स्वास्थ्य सधैं पहिलो आउनेछ। हाम्रो समयमा, धेरैले राज्य औषधीले यसको लामो समयदेखि यसको उपयोगितालाई चकित पारेको धारणा राख्छ। त्यस्ता बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान रुचाउँछन्।
औषधि "Biltricid": एनालग, निर्देशन र उपचार मा समीक्षा
दुर्भाग्यवस, हेलमिन्थियासिस एक खतरनाक हो र दुर्भाग्यवस, एक साधारण साधारण समस्या जुन कि थेरापीको अभावमा जटिलता निम्त्याउन सक्छ। औषधीले प्राकृतिक रूपमा उपचार प्रदान गर्दछ जुन परजीवीहरूको शरीर सफा गर्न सक्छ। तिनीहरु मध्ये एउटा ...
Senna धेरै लाभदायक गुणहरु संग एक जडिबुटी छ।
प्रकाशित 15.09.2019 11.11.2019
औषधी जडिबुटी सेन्ना लोक औषधिमा कब्जको उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, साथ ही साथ प्याथोलॉजीजको उन्मूलनको लागि जसलाई नरम मल र मलको आंतहरूको सजीलो निपटानको आवश्यकता पर्दछ। बुझाउँछ ...
ब्रोन्कियल दमको लागि आपतकालीन हेरचाह। ब्रोन्कियल दमको लागि लागूपदार्थ
ब्रोन्कियल दम एक दीर्घकालीन एलर्जी रोग हो जो सास फेर्न वा दिक्क लाग्ने आक्रमणको लक्षणबाट हुन्छ। यो रोग दुबै बच्चाहरू र वयस्कहरूमा देखा पर्दछ। प्रत्येक वर्ष यो विकृतिबाट पीडित मानिसहरुको संख्या बढ्दैछ ...
स्तन डिस्चार्ज म्यामोलोजिष्टसँग परामर्श गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित 15.09.2019 30.09.2019
के तपाईंले आफ्नो छातीबाट तरल पदार्थ पाएको याद गर्नुभयो? के तपाईं आत्तिनुहुन्छ? वा हुनसक्छ यो पूर्णतया सामान्य घटना हो? कुन रोग छातीबाट डिस्चार्जको लक्षण हुन सक्छ? तपाइँका सबैका लागि ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 218 अर्को पाना
67 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 6,636 प्रश्नहरू।